वस्तु शव स्टेशन अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कार्वाही गर्ने को ? – Gulminews
Home/जिल्ला समाचार/वस्तु शव स्टेशन अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कार्वाही गर्ने को ?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ जेष्ठ २०, आईतवार २१:४४ मा प्रकाशित
गुल्मी, जेठ– । गुल्मीको वस्तुमा एक दशक अघि देखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको करोडौं लागतको शव स्टेशन भवन र आवास गृह भवन अलपत्र परेको छ । २०६३÷०६४ सालमा सुरु गरिएको वस्तु शव स्टेशनको भवन एक तला ढलान गरी हाल सम्म अलपत्र पारिएको छ । एक दशक अघि अलपत्र योजनामा राज्यको कुनै निकायको नजर नपरेपछि स्थानियले ति ठेकेदारलाई कार्वाही गर्ने को ? भनेर प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
त्यस वस्तुमा पोल ठेकेदारबाट पनि त्यस्तै चरम लापर्वाही हुँदै आएको छ । २०६३÷०६४ साल देखि ३ सय ५८ वटा काठका पोलहरु गड्ने जिम्मा पाएका सागर लुईटेल हिजो आईतवार दश वर्ष पछि उक्त योजनाको फरफारक गरेको जानकारी उनै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भण्डारीले दिए ।